यस्ता समस्याबाट छुटकार पाउन खानुहोस् दही !! | सुदुरपश्चिम खबर
दही हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक चिज हो । दहीलाई हिन्दू धर्ममा शुभ संकेतका रुपमा लिइन्छ । कुनै काम शुरु गर्नुभन्दा पहिले दही खाने चलन छ । दही धार्मिक दृष्टिले मात्र नभई स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि फाइदाजनक छ ।
यस्ता छन् दही खाँदाका फाइदाहरुःहड्डी बलियो बनाउने – दहीमा प्रशस्त क्याल्सियम हुन्छ जसले दाँत तथा मांशपेशीमा रहेका हड्डीहरुलाई बलियो बनाउछ । पाचन प्रक्रिया – दहीको सेवनले पाचन प्रक्रियालाई स्फूर्त बनाउन सहयोग पुर्याउछ,
निद्रा – दहीको सेवन गरेमा राति निद्रा आनन्दले लाग्छ । राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने दैनिक खानाका साथ एक कचौरा दही खानु राम्रो हुन्छ । रगतको कमजोरी हटाउँने – दहीको नियमित सेवनले रगतको कमि तथा कमजोरी हटाउँछ।
पायल्स रोग – पायल्स रोग भएकाहरुलाई दही निकै उपयोगि मानिन्छ । यस्ता समस्या भएकाहरुले दिउँसो भोजनसँग खाँदा राम्रो हुन्छ । पेटको समस्या समाधान – दहीको मोही वा लस्सी बनाएर पिउँदा पेटको समस्या समाधान हुन्छ । पेटमा गडबडी हुँदा दहीमा बिरे नुन हालेर खाँदा राम्रो हुन्छ ।
अन्य फाइदा – दहीमा मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, तथा गुदाको रोगहरुलाई ठिक गर्छ । यसले कोलस्ट्रोल बढ्न पनि दिदैन । इम्यून सिस्टमलाई दह्रो बनाउछ। (gnewsnepal बाट सभार)
तोरिको सब्जी खानुका ५ फाइदाहरु !!
दैनिक एउटा ल्वाङ खानुका १० फाइदाहरु !!